Dowladda Soomaaliya oo Amar ku bixisay in Baaritaan lagu Sameeyo falkii lagu galay Guriga Cabdi Qeybdiid | SAHAN ONLINE
Dowladda Soomaaliya oo Amar ku bixisay in Baaritaan lagu Sameeyo falkii lagu galay Guriga Cabdi Qeybdiid
MUQDISHO – Madaxweynaha Dowladda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka hadlay isla markaana amar ku bixiyay in baaritaan degdeg ah lagu sameeyo falkii ay ciidamo ka tirsan dowladda ku galeen guriga Senator Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid.
Madaxweynaha ayaa taliyaha ciidamada Xoogga dalka Jeneraal Cabdiweli Jaamac Gorod ku amray in baaritaan ku sameeyo falkaas,isla markaana gacanta kusoo dhigo cid walba oo ku lug yeelata si sharciga loola tiigasado sida lagu yiri qoraal kooban oo lasoo dhigay Bogga Twitter-ka ee Madaxtooyada[Villa Somalia].
Senator Cabdi Qeybdiid ayaa ka hadlay ciidamada galay gurigiisa,wuxuuna sheegay in ay burbur u geysteen guriga ay galeen oo ku yaalla degmada Hodan ee gobolka Banaadir.
Cabdi Qeybdiid ayaa ku tilmaamay wax laga xumaado in isagoo xasaanad leh la baaro hoygiisa,wuxuuna booqday guriga ay galeen ciidamo ka tirsan dowladda Federaalka ee Soomaaliya.
“…Gurigii ay galeen waardiyayaashii ayey xir-xireen albaabadii ayey jajabiyeen wixii alaab ee guriga dhex yiil waa baareen taleefanadana waa ay ka qaateen xaaskeyga iyo carruurteyda…” ayuu yiri Senator Cabdi Qeybdiid oo horey mar usoo noqday Taliyaha Booliiska iyo Madaxweynaha Galmudug.